Flexible Sigmoidoscopy (အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Flexible sigmoidoscopy ဆိုတာဘာလဲ။
မှန်ပြောင်းအပျော့လေးအသုံးပြုပြီး အူမကြီးရဲ့ ဘယ်ဖက်အောက်ခြေပိုင်းကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာကို အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း (Flexible sigmoidoscopy) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းဟာ အူမကြီးရဲ့ အောက်ဖက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းကောင်း တခုဖြစ်ပါတယ်။
တခါတရံ အူမကြီးမှာ အလုံးအကျိတ်အသေးလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်နေတတ်ပြီး အဆိုပါ အလုံးတွေကို မှန်ပြောင်းကြည့်ရင်းနဲ့ တခါတည်း ဖယ်ရှားပစ်လို့ရပါတယ်။
Flexible sigmoidoscopy မလုပ်ချင်ဖူးဆိုရင် နောက်ထပ်မှန်ပြောင်းကြည့်နည်းတမျိုးဖြစ်တဲ့ colonoscopy လုပ်လို့ရသလို barium လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးတမျိုးကို စအိုထဲကတဆင့် အူလမ်းကြောင်းထဲ ထိုးသွင်းပြီး ဓါတ်မှန်ရိုက်တာ ဒါမှမဟုတ် CT ရိုက်တာတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။
အောက်ပါအခြေအနေတွေမှာ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
· အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေရင်။ ဗိုက်နာ၊ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊သွေးဝမ်းသွားခြင်း၊ဝမ်းသွားတဲ့ အလေ့အထပြောင်းခြင်း၊ကာလကြာရှည် ဝမ်းလျှောခြင်းအပါအဝင် အခြားသော အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းဇစ်မြစ်ကို ရှာတွေ့နိုင်ဖို့အတွက် မှန်ပြောင်းကြည့်ရတာပါ။
· အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နေရင် စောစီးစွာ သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်။ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ သင့်မှာ တခုမှ မရှိဖူးဆိုရင်တောင် အသက်၅၀ကျော်ပြီဆိုရင် အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းကို ငါးနှစ်တခါ ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါမှသာ ပြဿနာတခုခု ရှိနေပြီဆိုရင် စောစီးစွာ သိနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအန္တရာယ်တွေက ဘာတွေလဲ။
အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းငယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို အောက်ဖော်ပြပါ ပြဿနာတွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။
· အသားစနမူနာယူတဲ့ နေရာက သွေးထွက်ခြင်း။
· အူမကြီးနံရံ စုတ်ပြဲခြင်း။
· အသက်ရှုခြင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ သို့မဟုတ် နှလုံးပြဿနာများ ရင်ဆိုင်ရခြင်း။
ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ၊အန္တရာယ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မှန်ပြောင်းမကြည့်ခင်မှာ သေချာစွာကြိုတင်သိရှိနားလည်ထားဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ မရှင်းလင်းတာ၊မေးမြန်းချင်တာတွေရှိရင် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကို အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
အူမကြီးမှန်ပြောင်းမကြည့်ခင် ဘာတွေ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲ။
အူမကြီးမှန်ပြောင်းမကြည့်ခင်မှာ သင့်အူလမ်းကြောင်းကို လုံးဝရှင်းလင်းထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အကြွင်းအကျန် တစုံတရာရှိတယ်ဆိုရင် မှန်ပြောင်းကြည့်တဲ့အခါ မြင်ကွင်းကို ကွယ်နေနိုင်တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အူလမ်းကြောင်းကို လုံးဝရှင်းလင်းထားဖို့အတွက် ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်တွေကို စနစ်တကျနဲ့ ဂရုပြုလိုက်နာရပါမယ်။ အောက်ပါအချက်တွေကို ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
· မှန်ပြောင်းမကြည့်ခင်တရက်အလိုမှာ အထူးညွှန်ကြားထားတဲ့ စားသောက်မှုပုံစံကို လိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီး ပုံမှန်အားဖြင့် ဘာမှမစားခိုင်းပါဘူး။ ရေ၊ပြုတ်ရည်၊ဂက်စ်ပါတဲ့ သောက်စရာအအေးတွေ၊နို့ ဒါမှမဟုတ် ခရင်မ်မပါတဲ့ လက်ဖက်ရည်၊ကော်ဖီ အစရှိသော ကြည်လင်တဲ့ အရည်တွေကိုပဲ သောက်ရပါမယ်။ မှန်ပြောင်းမကြည့်ခင် ညသန်းခေါင်က စပြီး ဘာမှ မစားမသောက်ရတော့ပါဘူး။
· မှန်ပြောင်းမကြည့်ခင်တရက်အလိုမှာ ဝမ်းနှုတ်ဆေး သုံးစွဲရပါမယ် (အရည် ဒါမှမဟုတ် ဆေးပြား ဖြစ်နိုင်ပါတယ်)။
· ဝမ်းချုဆေးရည် အသုံးပြုပါ။အချို့လူနာတွေမှာ မှန်ပြောင်းမကြည့်ခင်ည ဒါမှမဟုတ် နာရီအနည်းငယ်အလိုမှာ ဝမ်းချူဆေးရည်သုံးစွဲဖို့ လိုတတ်ပါတယ် (အူလမ်းကြောင်းကို လုံးဝရှင်းလင်းဖို့ပေါ့)။ ဒါမှမဟုတ် မှန်ပြောင်းကြည့်မယ့်နေ့မနက်မှာ ဝမ်းချူဆေးရည်နှစ်တောင့် အိမ်မှာကတည်းက သုံးစွဲလာဖို့ ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
· လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ ဆေးတွေကို ချိန်ဆပါ။မှန်ပြောင်းမကြည့်ခင် အနည်းဆုံးတပတ်လောက်အလိုကတည်းက သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးတွေအကြောင်း သင့်ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ (အထူးသဖြင့် ဆီးချိုသမားတွေ၊သံဓါတ်ပါတဲ့ ဆေးသို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်အားဆေးတွေ၊အက်စ်ပရင် သို့မဟုတ် တခြားသွေးကျဲဆေးတွေ သုံးစွဲနေရသူတွေ ဆိုရင်ပေါ့)။
သင့်အနေနဲ့ ဆေးပမာဏကို ချိန်ဆတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် (ဖြစ်နိုင်ရင်)ဆေးသုံးစွဲမှုကို ယာယီရပ်နားထားတာမျိုးလုပ်ဖို့ လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်တာဟာ ၁၅မိနစ်၊မိနစ်၂၀လောက် ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီး မှန်ပြောင်းအပျော့စားကို သင့်စအိုမှတဆင့် ခန္ဓါကိုယ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြင်ကွင်းကြည်လင်ပြတ်သားဖို့အတွက် သင့်အူမကြီးထဲကို လေမှုတ်သွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနောက်မှာတော့ သင့်ဆရာဝန်အနေနဲ့ အူလမ်းကြောင်းရောင်ရမ်းခြင်း၊အလုံးအကျိတ်များ ဖြစ်ပွားခြင်း စတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရှာဖွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်ရင် အသားစနမူနာယူတာမျိုး၊ဓါတ်ပုံရိုက်ယူတာမျိုးတွေ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ မေးချင်တာ ဒါမှမဟုတ် စိုးရိမ်ပူပန်တာမျိုးလေးတွေ ရှိနေတယ်ဆိုရင် အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။.
မေ့ဆေး၊အိပ်ဆေးပေးထားပြီး လုပ်တယ်ဆိုရင် တနာရီလောက်အတွင်းမှာ သင်နိုးလာမှာ ဖြစ်ပြီး နာရီအနည်းငယ်လောက်ကြာအောင် နေရထိုင်ရတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် မပူပါနဲ့၊အချိန်တန်ရင် ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ မှန်ပြောင်းကြည့်တာကနေ သိရှိလာတဲ့ ရလာဒ်တွေကို ဆရာဝန်က သင့်ကို ပြောပြမှာဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ကုသဖို့လိုတယ်ဆိုရင်လည်း ကုသမှုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကြံပြုဆွေးနွေးပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။။
အထူးတလည် ညွှန်ကြားထားတာမျိုး မရှိဖူးဆိုရင် မှန်ပြောင်းကြည့်ပြီးတဲ့ နောက်တနေ့မှာပဲ လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်နိုင်ပါပြီ။
Flexible sigmoidoscopy. http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/flexible-
sigmoidoscopy/basics/definition/prc-20014697. Accessed July 16, 2016.
http://www.medicinenet.com/flexible_sigmoidoscopy/article.htm. Accessed July
Flexible Sigmoidoscopy. http://www.webmd.com/colorectal-cancer/flexible-
sigmoidoscopy. Accessed July 16, 2016.